Barnaamijka Xeltek |
Faahfaahinta SUPERPRO/XPS01 Saldhigga Barnaamij-ku-dhex-dhexaadintu waa xal guud oo aad u fiican oo loogu talagalay barnaamijyada guddiyada PCB-ga. Barnaamijyo badan oo SUPERPRO® / IS0 16-CH ISP ah, qalab tijaabo ah, loox loo habeeyey, side ...
50861 kumbuyuutarrada aaladda oo sii kordhaya. Qalabka taageerada leh Vcc laga bilaabo 1.2V ilaa 5V. Barnaamijyadu si xawli ah ayay u sii kordhayaan ...
Through Wax soo saar sare ...
Illaa iyo hadda, Taageer 243 IC soo -saaraha IC, aaladda 36688 kumbuyuutarrada oo sii kordhaya. Qalabka taageerada leh Vcc laga bilaabo 1.2V ilaa 5V. Xawaare aad u dheereeya oo ka sarreeya moodeelka SUPERPRO/501S. Waxaa lagu dhisay 48 darawalada biinanka caalamiga ah. Qaabka PC -ga martigeliyay oo istaagay ...
qalabka oo sii kordhaya. Tilmaamo: Waxay taageertaa 87454 nooc oo aalad ah oo ka socda 305 IC soo saarayaasha (marka la gaaro 3/15/2013) waxayna sii kordheysaa. Waxay taageertaa EPROM, EPROM ee la soo bandhigay 、 Isbarbar yaac iyo Serial ...